HETMAN PHOTO IWEGHACHI FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Taa, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ ịchekwa foto na ụdị kọmputa. Ọ ga-adị ka ọ dị mma, mana ọ ga-efunahụ foto ya n'ihi nhichapụ ya na mberede, nhazi nke diski ma ọ bụ nje ọgụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Hetman Photo Recovery-utility ga-aghọ onye nnyemaaka dị mkpa.
Hetman foto Iweghachite bụ usoro nchịkọta faịlụ nke dị irè iji rụọ ọrụ na foto. Ihe bara uru bụ nke na-adọrọ mmasị, nke mbụ, ihe dị mfe na ọrụ zuru oke.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ iji weghachi faịlụ
Ụdị nyocha abụọ
Hetman foto Iweghachite nyere abụọ ụdị scanning - ngwa ngwa na zuru ezu. Na nke mbụ, a ga-eme ngwa nyocha ahụ ngwa ngwa, ma ọ bụ ụdị nyocha nke abụọ nwere ike ime ka ị nweta nsonaazụ ọchụchọ kachasị mma maka faịlụ ehichapụ.
Iji mee ka ịchọọ ịchọta faịlụ, mezie ọnụọgụ dị ka nha faịlụ ndị ị na-achọ, oge okike okike ma ọ bụ ụdị ihe oyiyi.
Mgbe agwusiri ike, a na-egosipụta ihe oyiyi ndị ahụ na-egosi na ihuenyo. Ị ga-achọ akara akara ndị ahụ a ga-eweghachite, mgbe nke a gasịrị, a ga-ajụ gị ka ị họrọ otú ha ga-esi chekwaa: na diski ike, gbaa ọkụ na CD / DVD, bugara ya na vidiyo vidiyo ISO ma ọ bụ bulite site na FTP.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi azụ ma nọgide na-arụ ọrụ na mmemme ahụ, wee debe nsonaazụ scan ahụ na kọmputa gị.
Na-echekwa ma na-arị elu diski
Iji nwee ike iweghachite ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke faịlụ, ojiji nke disk ga-ebelata. Ị nwere ike idozi nsogbu a ma ọ bụrụ na ị chekwaa oyiyi disk ahụ na kọmputa iji weghachite ya n'usoro ihe omume ahụ ma nọgide na-eweghachi ihe oyiyi ahụ.
Mepụta disk diski
A naghị atụ aro ka a zọpụta gị na diski nke e weghachiri ha. Ọ bụrụ na ị nwere nanị otu disk na kọmputa gị, mepee disk dị iche iche dị na Hetman Photo Iweghachite ma chekwaa ihe oyiyi gị na ya.
1. Njikọ dị nro na nkwado asụsụ Russian;
2. Arụmọrụ nke ọma na ọrụ niile dị mkpa nke nwere ike ịchọrọ na usoro nke mbigharị.
1. A naghị ekesa ya n'efu, mana onye ọrụ ahụ nwere ohere iji ụdị mbipute ahụ.
Hetman foto Iweghachite nwere ike ịbụ otu n'ime ngwọta kachasị mma maka iweghachi foto na ihe oyiyi ndị ọzọ. Usoro ihe omume ahụ nwere ezigbo interface enyi na ọrụ dị iche iche, nke ị nwere ike ịhụ n'onwe gị site n'ibudata mbipute ikpe ahụ.
Download Hetman Foto Iweghachite
Hetman Partition Recovery Wondershare Photo Iweghachi Starus Photo Iweghachite Iweghachite foto Ime Anwansi
Hetman foto Iweghachite bụ ngwá ọrụ dị irè iji weghachite foto dijitalụ site na kaadị ebe nchekwa, draịvụ USB na draịva siri ike.
Onye Mmepụta: HetmanRecovery.com